Colour Change Garnet, kubva kuTanzania / kwete kurapwa / video
Tags Ruvara Change Garnet
A mix of spessartite uye pyrope garnet. Iyi garnet inoratidza kuchinja kwemavara kubva ku-brownish masikati uye rose rose rinopenya mumoto. Kuchinja kwemavara kwakanyanya uye kwakanyanya, kunopfuura kwealexandrite inodhura.
Nhengo isina kuwanikwa uye inokosha yegarnet boka rematombo. Inonyanya kudiwa nokuda kwekukwanisa kwayo kusiyanisa maruva zvichienderana nerudzi rwechiedza chine maonero ayo. Iko kukwanisa kuchinja shanduko kazhinji kunokanganisa kukanganisa kwe pleechroism, iyo inokwanisa kukwanisa kuratidza mavara akasiyana zvichienderana nemaonero ekuona, asi izvo zvinoshamisa zvekushanduka kwemavara hazvibvi pane maonero ekuona. Mavara akachinja garnet inowanzosanganiswa-kusanganiswa kwepessartite uye pyrope garnet uye mumatambudziko akawanda, inogonawo kuva nematauro e grossularite kana almandine garnet.
Kuwedzera kwekuchinja-ruvara kunogona kuva kunoshamisa, kazhinji kunopfuura kwealexandrite yakanakisisa. Mazhinji emagamba aya acharatidza ruvara rwebhuruu-ruvara rwebhuruu kana ruvara kana ruchionekwa pasi pezuva masikati, asi kana rakataridzirwa pasi pechiedza chechiedza, rinenge rakaita sedzakasvibirirwa kukiki. Kune marudzi akasiyana-siyana emamwe mavara ekuchinja pamwe chete. Kuti tinyatsonzwisisa huwandu hwakazara hwemavara garnet, micheka inofanira kuonekwa pasi pemhando dzakasiyana-siyana dzemwenje, kusanganisira mangwanani-ngwanani masikati, masikati masikati, chiedza chechiedza uye chiedza chekudzivirira kana kenduru.
Kungofanana nematombo anokosha ejarnet, garnet yemuvara haina kuzivikanwa kuti inobatwa kana kuwedzerwa chero ipi zvayo.
Tenga zvisikwa Mutumbi Shanduko Garnet mudura redu